Indawo yokubona i-Indiya e-Indian e-Majestic Darjeeling, ukumkanikazi weHimalaya
Awunakho ukubanga ukuba ubonile i-Mpuma ye-Indian de utyelele eDarjeeling. I-Visa yaseIndiya Iindwendwe ziya kuthakazelelwa sisikhokelo sethu esiquka iDarjeeling Railway, Tiger Hill, Darjeeling Ropeway, Japan Peace Pagoda kunye Sandakphu Trek ngabahleli bethu abakumgangatho wokuhamba.
Eyaziwa njengoKumkanikazi weeHimalaya, iDarjeeling sisikhululo esithandwayo senduli eMantla Mpuma eIndiya, kumganyana ukusuka eKolkata. Yenye yezona ndawo zibabazekayo kuzo zonke izikhululo zeenduli zaseIndiya kwaye yayiqhele ukuba yindawo yokubuyela ehlotyeni yaseBritane ngexesha lobukoloniyali ngenxa yemozulu yayo emnandi unyaka wonke. Ukusasaza phezu kwenduli, egcwele izityalo utyalo lweti Kwiinduli eziqengqelekayo, namhlanje yindawo yokhenketho ethandwayo ngobuhle bayo obuhle kunye nemozulu epholileyo. Wonke umntu okhe waya eDarjeeling uyakungqina kwinto yokuba yenye yezona ndawo zintle kulo lonke elase-India kwaye azilibaleki. Ukuba ufuna ukutyelela iHimalayas Darjeeling enamandla iya kuba lolunye lwezona zikhetho zilungileyo kuwe njenge-vista enikezela ngeeHimalaya ayinakulinganiswa. Nasi isikhokelo sokuBonwa kweDarjeeling kubakhenkethi kuwe ukuba ucwangcisa iholide eDarjeeling.
I-Visa yaseIndiya kwi-Intanethi (eVisa eIndiya) -Isidingo esifunekayo sokundwendwela iDarjeeling
Urhulumente waseIndiya ibonelele ngendlela yanamhlanje yokusetyenziswa kwe-Indian Visa Online application. Zonke iindwendwe zingathatha ntliziyo ukuba ngoku le nkqubo ilula, kulula, iyakhawuleza kwaye ingenziwa ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho. Oku kulungile ngokwenene kubafaki-zicelo njengoko iindwendwe eziya eIndiya zingasafuneki ukuba zenze idinga lokundwendwela ngokomzimba kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya okanye kwiNdlu yoZakuzo yaseIndiya kwilizwe lakho.
Urhulumente waseIndiya ivumela ukutyelelwa e-India ngokwenza isicelo I-Visa yaseIndiya kwi-intanethi kule webhusayithi ngeendlela ezahlukeneyo. Umzekelo weenjongo zakho zokundwendwela eIndiya zinxulumene nentengiso okanye injongo yeshishini, ke uvumelekile ukuba ufake isicelo I-Visa yeshishini laseNdiya Kwi-Intanethi (iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye i-eVisa yaseIndiya ngeShishini). Ukuba uceba ukuya e-India njengondwendwe lwezonyango ngesizathu sezonyango, ukuya kugqirha okanye kwahlinzwa okanye impilo yakho, Urhulumente waseIndiya uyenzile I-Visa yezonyango yaseIndiya Kwi-Intanethi iyafumaneka kwiimfuno zakho (iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye i-eVisa yaseIndiya ngezoNyango). I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya ekwi-Intanethi (I-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye i-eVisa yaseIndiya yoMkhenkethi) ingasetyenziselwa ukudibana nabahlobo, ukudibana nezihlobo eIndiya, ukuya kwizifundo ezinjengeYoga, okanye ukubona ngokubona nokhenketho.
Unokwenza nawuphi na umsebenzi e-India ngaphandle kokundwendwela iindawo zokugcinwa komkhosi kwi-Visa yabakhenkethi yaseIndiya okanye undwendwele iiPaki zeSizwe eIndiya ezigcinwe kule post. Urhulumente waseIndiya avumele wena ukuba wenze isicelo Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India) ngeenjongo zabakhenkethi (Indian Visa Online okanye eVisa India Tourism) kuRhulumente wase India. I Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya ngoku ikwi-intanethi enokugqitywa kwimizuzu embalwa.
IVisa yaseIndiya yaBakhenkethi-Ezinye iindawo ezibukekayo kunye neendawo zokuBuka
Ukuba ufunda esi sithuba, ke unomdla wokufumana ezinye indawo zokubona. Izikhokelo zethu zokuhamba kunye neengcali zikhethe ezinye indawo ukuze zikulungele ukuba ufike kwi-Visa ye-elektroniki yaseIndiya (eIndiya Visa kwi-Intanethi). Unokufuna ukujonga kwezi zithuba zilandelayo, Kerala, Oololiwe abakhulu, Indawo yabakhenkethi ephezulu kwiiNdawo ezi-5, India Yoga amaziko, Tamil Nadu, I-Andaman Nicobar Islands, New Delhi, Goa, Rajasthan kwaye Iipaka zikaZwelonke eIndiya.
Isikhokelo se-India Visa
I-Visa yaseIndiya ngoku ikwi-Intanethi (eVisa India) kwaye Isicelo seVisa saseIndiya iyafumaneka kwi-Intanethi inokugcwaliswa ngemizuzu engama-2-3 kwi-intanethi. Abemi baseBritane, Abemi baseU.SA phakathi kwe-180 kunye nezinye izizwe zikuko Ifanelekile i-Visa yaseIndiya.
Uninzi lwezicelo zeVisa zaseIndiya ziyaliwe ngenxa yomgangatho wobubi bepasipoti, jonga isikhokelo I-Indian Visa yeemfuno zeFoto kwaye I-India Visa Passport Scan iimfuno. Zine Iindidi zeVisa zaseIndiya . Yonke into osoloko ufuna ukuyazi nge-Visa yaseNdiya kunye nendlela yokuphepha ukwaliwa igutyungelwe Ukwalelwa kweVisa yaseIndiya nendlela yokuphepha.
I-Darjeeling iHimalayan Railway
Darjeeling Himalayan Railway okanye Darjeeling Toy Toy yenye yezona zinto zidume kakhulu zesikhululo senduli. Kukwanje isebenza ngenjini enomphunga (nangona ukhetho lwenjini yedizili ikwafumaneka kubagibeli abanokuthi bangafuni ukuhamba ngololiwe othathwe yinjini yomphunga) kwaye egubungela iikhilomitha ezingama-88 kuphela, olu loliwe ulidala kwaye akukho nto ifana nomtsalane wokuhamba Qeqesha njengaleyo ngelixa usiya kubona imiboniso emangazayo yeeHimalaya zidlula kuwe ngaphandle. Kuba ibalulekile eDarjeeling nakwilifa lemveli laseIndiya, I-UNESCO ibhengeze ukuba yiNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi. Ungathatha i-Toy Train Joyride esuka eDarjeeling ukuya eGhum, isikhululo esiphakeme kakhulu kwiDarjeeling Himalayan Railway, kwaye apho uza kuhamba khona ngeBatasia Loop apho uloliwe athabatha khona i-360 degree, okanye iToy Train Jungle I-Safari ehamba ukusuka eSilliguri iye eRangtong nasemva, ngelixa ihamba ngeMahananda Wildlife Sanctuary.
Le ndibano eGhum yile indawo yokuphuma kwelanga eDarjeeling apho abakhenkethi bathontelana ukuya kubona ukuphuma kwelanga okuhle ntsasa nganye. Ukubona ilanga liphuma apha kunye nembono yeencopho zeKanchenjunga ngamava anyaniweyo. Awuyi kuze ubone ukuphuma kwelanga esixekweni nakwindawo iintaba ezinkulu zaseIndiya, Ukufikelela esibhakabhakeni esibhakabhaka esiluhlaza, yenza umbono oya kuwukhumbula ngonaphakade. Ukuba uza kuba seDarjeeling ehlotyeni kuya kufuneka uqiniseke ukuba ufikelela kwiNduli nge-4.15 AM ekufuneka uhambe ngayo nge-3.30 AM, kodwa ebusika ungahamba nge-4.15 AM kuba ukuphuma kwelanga kuya kulibaziseka . Qinisekisa ukuba ulungele ukunyuka okufutshane ukufikelela kwindawo apho uza kufumana umbono ogqwesileyo wokutshona kwelanga.
UDarjeeling Ropeway uyiyo indlela egqibeleleyo yokujonga ngoxolo iphelele kwi-panoramic vista yendawo enentili eluhlaza kunye nekhephu. Emi kwi-7000 yeenyawo ngaphezulu komhlaba, yinkqubo yemoto yekhebula- enyanisweni, Inkqubo yokuqala yemoto yaseIndiya -Kuneemoto zekhebula ezili-16 ezinokuhlalisa abantu abayi-6 inye kwaye ezihamba ukusuka eNorth Point eSingamari ukuya eSingla Bazaar kufutshane nomlambo iRamman. Uya kubona amasimi eti eDarjeeling, iingxangxasi, iintaba, kubandakanya iKanchenjunga, zonke ngelixa zihamba kancinci kwiimoto zentambo. Ekugqibeleni uza kuphonononga umhlaba ngaphambi kokuba uphinde ubuye.
IJapan yoxolo iPagoda
Wakhelwe yimonki kaBuddha ovela eJapan, UNichidatsu Fujii, owakha zonke iiStupas zoxolo eIndiya, Uxolo lukaDarjeeling uPagoda, njengazo zonke iiPagodas zoXolo, sisixhobo esakhiwe ukukhuthaza uxolo phakathi kwabantu bazo zonke iintlanga, iindidi, kunye neenkolo. Iimonki zaseJapan zeBudhhist zaqala ukwakha iiPagodas zoxolo kwihlabathi liphela emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi ukuze kukhuthazwe umyalezo woxolo kunye nokuvisisana. Kuma-80 ezoPagodas zoxolo ezakhiwe emhlabeni, iDarjeeling's Peace Pagoda yenye yazo. Yenzelwe ngu-M Okha, enee-avatars zegolide zikaBuddha kunye nomsebenzi wobugcisa obonisa ubomi bakhe obumiliselwe kumatye esanti. Kukho itempile yaseJapan ekufutshane onokuyityelela xa undwendwela iPagoda.
Ukuba uphezulu kwaye ukwimo yohambo oluyimfuneko, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka uqhubeke uye eDarjeeling. Ungahamba ngeSandakphu Peak, eyiyo Incopho ephezulu kwi-West Bengal. Kuya kuba luhambo olunzima kodwa kufanele ukuba lube nomvuzo xa ufika phezulu kwaye uza kubona umbono ogqwesileyo. Uyakonwabela nendlela eya phezulu ukuba uyayixabisa indawo eluhlaza eluhlaza kunye neentyatyambo ezintsha, oya kuthi ufumane uninzi lwazo kolu hambo. Uyacetyiswa ukuba uphathe iinkampu zakho nangona ungafumana izindlu zeendwendwe kwezinye iinkampu, kwaye uphathe izixhobo zokuhamba ngendlela efanelekileyo kunye nekhithi yezonyango xa kunokwenzeka. Kuya kufuneka ufumane imvume yokuhamba ngaphambi kokuba uvunyelwe ukuba uhambe apha.
Abemi bamazwe amaninzi kubandakanya eunited States, Khanada, Fransi , Nyu Zilend, Ostreliya, Jemani , Swiden, Dominikha, Swizalend, ElamaTaliyane, Singapho , iunited Kingdom, bafanelekile ukuba bafumane iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi (i-eVisa India) ebandakanya ukutyelela iilwandle zaseIndiya kwiVisa yabakhenkethi. Abahlali abangaphezu kwamazwe ayi-180 asemgangathweni we Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India) ngokwe Indian Visa Ukufaneleka kwaye usebenzise iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi ebonelelwa yi Urhulumente waseIndiya.
Ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo okanye ufuna uncedo kuhambo lwakho oluya eIndiya okanye iVisa yaseIndiya (ungafaka isicelo eVisa India), Indian Visa ekwi-Intanethi apha kwaye ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye ufuna ingcaciso kufuneka uqhagamshelane nayo IDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya ngenkxaso kunye nesikhokelo.